Ciyaaruhu waxay qayb muhiim ah ka noqon doonaan barnaamijka Viber chat app | Androidsis
Si loo dhammeeyo oo loo bilaabo sanadka sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan, Viber waxay rabtaa inay soo bandhigto barnaamijkeeda ciyaaraha bulshada. Sida saxda ah bishii Febraayo ayay ahayd waxaa iibsaday Rakuten $ 900 milyan.
Bilaabi doonaa tan safar cusub oo wata 3 kulan oo cusub oo laga heli doono shan wadan: Belarus, Malaysia, Israel, Singapore iyo Ukraine. Daahfurka caalamiga ah ee barnaamijkan ayaa dhici doona bisha Janaayo 2015 si ay dhammaan dadka isticmaala Viber u helaan. Marka laga soo tago xaqiiqda ah inay ahayd dhowaan markii aasaasaha Viber, Talmon Marco, uu ku dhawaaqay in Viber uu soo galayo adduunkan ciyaaraha fiidiyowga ka hor dhammaadka sannadkan.
1 Iyagoo daba socda kuwa kale
2 Saddexda cinwaan ee ugu horreeya
Iyagoo daba socda kuwa kale
Sidee tahay isbeddel ku samee barnaamijka deegaankaaga barnaamijkaaga, adeegyada ama ciyaaraha, Viber waxay raacdaa tusaalaha dadka kale si ay isugu dayaan inay ka dhigaan barxadeed tayo sare leh, marka laga reebo xaqiiqda ah in la iibsaday, waxay u adeegtay cirbad weyn oo caasimada ah. Iyo sida barnaamijyada kale ee lagu sheekeysto, ku xiridda koontada Viber-ka barxadda ciyaaraha ayaa u oggolaan doonta dadka isticmaala inay hadiyado u diraan asxaabtooda, hubi liiska ciyaartoyda ugu sareysa, la xariirida xiriirada, ama xitaa wadaagaan dhibcaha. Qaab Ciyaaraha Google Play.
Ujeeddooyinka kale ee Viber ee barmaamijkan cusub ee ciyaaraha ayaa ah inay lacag ku kasbadaan awoodo inaad ku iibsato walxaha farshaxanka ah ciyaarta dhexdeeda, dhacdo soo kordheysa oo loo rogay faa'iidooyin muhiim ah.
Saddexda cinwaan ee ugu horreeya
Viber waxay gaadhay heshiisyo dhawr ah oo ay ku bilaabayso saddex cinwaan. Istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga ee ugu horreeya waa Storm8, oo abuuray Viber Candy Mania iyo Viber Pop, oo leh koox horumarineed oo labaad oo la yiraahdo Playtika, oo la wareegtay Wild Luck Casino. Waxa ka dhigaya ciyaartan cusub ee Viber-ka ayaa ah in astaamahoodu ay isku mid yihiin oo lagu arki karo uruurinta warqadaha dhejiska ee Viber.
Ujeedada ugu weyn ee Viber waa in la raaco waxa Kakao Talk gaadhay, taas oo faa'iido weyn ka heshay sanadkan barnaamijkeeda ciyaaraha, iyo Khad, in gaadhay 192 milyan oo doolar Q3 ee isla sanadkaan iyada oo ay ugu wacan tahay adeegyadeeda ciyaaraha bulshada.
Marka la eego barnaamijka laftiisa, way u fududaan doontaa adeegsadaha inuu ku raaxeysto ciyaartooda iyo farriimahooda, barnaamijku wuxuu leeyahay qayb heegan u ah ogeysiisyada ciyaarta iyo mid kale oo ku saabsan waxa wada hadalka laftiisu yahay. Iyo bilaha ugu horreeya ee 2015, ka dib markii la bilaabay caalami ah, ciyaaro cusub ayaa imanaya si ay madashu u qaadato hay'ado badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Viber wuxuu galaa adduunka ciyaaraha fiidiyowga ee qalabka mobilada